Abamasonto bazimisele ukulandela imiyalelo yokhuvethe ngePhasika - Bayede News
Abamasonto bazimisele ukulandela imiyalelo yokhuvethe ngePhasika
Izolo ziqalile izinkonzo zePhasika kanti kwabanye zaqala ngeSonto ngenkathi kuyinkonzo yamasundu. INingizimu Afrika yonke ibimagange ngokuthola ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa neKhabhinethi lakhe bazothatha siphi isinqumo ngala maholidi ePhasika njengoba nyakenye wanxusa ukuba amakholwa akhonzele emakhaya ngoba ukhuvethe laludla silaza ludla fumuka.
Nokho kulokhu uwadedelile amakholwa wathi awayokhonza ongabonwayo, wabeka imigomo okumele ilandelwe eminye yayo ukuthi kube nabantu abangama-250 uma besendaweni evalelekile bese beba ngama-500 uma bengaphandle.
Lesi sinqumo amakholwa akhombise ukusithakasela aphinda agcizelela kulokhu okushiwo nguMengameli. UMbhishobhi uMaroti Mashashane weSouth African Christian Forum ephawula ngenkulumo kaMengameli uthe: “UHulumeni ukwazile ukusihlangabeza ngemibandela yakamuva, sithobile futhi siyathokoza ngenkulumo evele ngoMengameli, kuyabonakala ukuthi bakwazile ukusilalela isicelo sethu.”
Ekhuluma nelaboHlanga ngaphambi kwenkulumo kaMengameli ngoLwesibili ebusuku uthe uma uHulumeni ezivala izinkonzo bazophoqeleka ukuthi bawuse enkantolo.
Ephawula ukuthi ngabe uHulumeni uphoqwe yizinsongo zabo yini ukuba uthathe lesi sinqumo uthe: “Siyacabanga ukuthi kwenziwe yikho ngoba besesiwahlelile namaphepha ebesizowafaka enkantolo ngoLwesithathu ekuseni ukube inkulumo ayibanga yinhle, besizofaka amaphepha ekutheni liphinde liqulwe ngaso leso sikhathi.”
Ukuphawula kwakhe ngezibalo ezibekwe uMengameli uRamaphosa uthe basamile ekutheni noma inkulumo ibe yinhle kepha amakholwa awangabi budedengu, wawanxusa ukuba angahlanganisi amabandla amaningi kodwa akhonze ngendlela abavame ukwenza ngayo ngamaSonto, kube wukuthi banezinsuku ezengeziwe zokukhonza.
“Amakholwa kumele akugweme ukuyolala ezindaweni ezithize njengoba kujwayele ukwenzeka, sithole abazalwane bedla, baphinde bageze ndawonye, lapho-ke bayosinikeza inkinga. Sicela nezinkonzo zingadluli emahoreni amathathu futhi kungaphekwa. Asifuni uma kudlula iPhasika bese singcwabana sodwa singamakholwa,” usho kanje.
UMfundisi uSabelo Manyathi webandla iLife Bible Church uthe bebelindile njengabaholi ukuthola ukuthi kuzokwenzekani ngesinqumo sikaMengameli. Ekhuluma nelaboHlanga ngoLwesibili uthe: “Vele izinkonzo zePhasika seziqalile njengoba isonto lokudumisa liqala ngeSonto ngenkonzo yamasundu kuze kube iSonto elilandelayo lapho kuthiwa uJesu uvukile.”
Maqondana nokugwema ukuthelelana ngokhuvethe kwamakholwa uthe: “Ngeke sibe budedengu, siyaqhubeka silandela imigomo yokhuvethe, namanje njengoba sizihlelela silandela yona. Sizoqinisekisa ukuthi ongasifakile isifonyo akangeni, sibulala amagciwane, izihlalo zibekwa kulandelwa ibanga okumele livuleke. Sisazoqhubeka sihloniphe singabeki impilo yabantu engcupheni. Sikhuthaza nabazalwane ukuthi beze ezinkonzweni bezinakekelile. Uma umuntu ezizwa ukuthi akaphathekile kahle angezi izinkonzo uzozithola ebuxhakaxhakeni.”
UMfu uManyathi uthi kumele kwamukelwe ukuthi kuzoba nezinguquko, akuzokwenzeka ngendlela ejwayelekile njengoba izinkonzo zibekelwe isikhathi esithile.
Isizwe sibhodla indlala kuphele amathuba okuqashwa
Uthe njengebandla ukugubha uMkhosi wePhasika kulo nyaka wezi-2021 kumele kungabi into eyijwayezi kepha akube ukulungisa lapho kungekho khona ubulungiswa emphakathini.
“Isibonelo, eMgungundlovu kubulawa abantu, kuhlukunyezwa izingane nabesifazane ngakho-ke ibandla kumele likhulume ngalezi zinto. Siqinise imindeni ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi bashiywe yizihlobo zabo maqede bangcwaba ngendlela engajwayelekile, abantu imimoya yabo iphansi. Kuleli Phasika ibandla kumele lelaphe imiphefumulo yabantu. Kumele sikhulume nesimo saseNingizimu Afrika, sikhulekele uZulu wonkana njengoba kwebuze iSILO, sikhulekele ukuthi siphinde sithole iNkosi eqotho, lapho siyobe sikhulume nesimo izwe elibhekene naso,” kusho uMfu uManyathi.
Ngenkathi elaboHlanga lihambela amabandla lifike elungiselela iPhasika. Leli phephandaba ebelikubheke kakhulu ukuthola ukuthi ngabe amakholwa ayaqhelelana yini ukulandela imigomo yokhuvethe. Nokho okuqaphelekile ukuthi kulawo anezitulo ezihlangene bekunamekwe amaphepha abhaliwe ukuthi kungahlalwa kuzona kanti kwezinye kushiywe ibanga.
UNkk uNelisiwe Ngcobo obengomunye wabebelungisa uthe: “Sizohlanza indawo yethu futhi siyazi ukuthi kukhona abazofika abangajwayele ukukhonzela lapha ingakho sengeza nezitulo. Siphinda sigcwalisa nezibulalimagciwane.”
nguSiyethaba Mhlongo Apr 2, 2021